ဗေဒင် Archives - SANTHITSA
ထီပေါက်စေ တဲ့ နိမိတ်ပြ အိမ်မက်
ထီပေါက်စေ တဲ့ နိမိတ်ပြ အိမ်မက် အိပ်မက်ကို လူတိုင်း မြင်မက် ပါတယ်။ အိပ်တာ နဲ့ မက်တဲ့ အိပ်မက်မျိုးက သွေးလေ ချောက်ချားပြီး မက်တဲ့ အိပ်မက်၊ ရှေးယခင်က ခံစားဖူးတာ ကို အကြောင်းပြုပြီး မက်တဲ့ အိပ်မက်၊ နတ်ဆိုးနတ်ဝါးတွေ လှည့်စားလို့ မက်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးရယ် ဟူရယ် အိပ်မက် သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ မိမိတို့ အိပ်မက်၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကို ကြိုတင်၍ သတိ မထားသည့် အတွက် အကျိုး ခံစားသင့်သော အရာများ လွဲချော် သွားသည်လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဘဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ပြောကြားခဲ့တဲ့ ထီပေါက်စေတဲ့ နိမိတ်ပြ အိမ်မက်အချို့ကို …
စနေသားသမီးများ လာဘ်လာဘကောင်းမွန်စေရန် ဒီလိုလုပ်ပါ….. စနေသားသမီးများလာဘ်လာဘကောင်းမွန်စေရန်….. ဘဝပေးကံကြမ္မာဆိုးလွန်း၍ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်စွာရှင်သန်နေရသောသူများ ။ ဈေးရောင်းမကောင်း၊လုပ်ငန်းအဆင်မပြေ၊စိတ်မချမ်းသာ၊ကိုယ်မကျန်းမာ အိမ်တွင်းမပြေလည်၍ စိတ်ဓာတ်ကျမတတ်ဖြစ်နေသူကြသူများအတွက်……. စာသင်ကျောင်းများတွင် “ပေတံ”များလှူဒါန်းပေးရမည်။အနည်းဆုံး တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် လှူဒါန်းပေးရမည်။ “အမြဲထာဝရကိုယ်ရောကျန်းမာစိတ်ရောချမ်းသာစွာဖြင့် စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးတက်ရပါစေလို၏”ဟုဆုတောင်းပါ။ ဤအစီအရင်သည်လွယ်ကူရိုးရှင်းအစွမ်းထက်ထိရောက်သောကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက စနေသားသမီးများ စီးပွားလာဘ်လာဘကောင်းမွန်လာပြီး ချမ်းသာ သုခ ခြင်းကိုအပြည့်အဝ ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည် အားကိုး ဆန္ဒ ရှိသူများ အတွက်…. ဗေဒင်နှင့်အထူးယတြာပေးပညာရှင် ဆရာပေါက်ကျိုင်း 09776478912 unicode စနသေားသမီးမြားလာဘျလာဘကောငျးမှနျစရေနျ….. ဘဝပေးကံကွမ်မာဆိုးလှနျး၍ ကွမျးတမျးခကျထနျစှာရှငျသနျနရေသောသူမြား ။ ဈေးရောငျးမကောငျး၊လုပျငနျးအဆငျမပွေ၊စိတျမခမျြးသာ၊ကိုယျမကနျြးမာ အိမျတှငျးမပွလေညျ၍ စိတျဓာတျကမြတတျဖွဈနသေူကွသူမြားအတှကျ……. စာသငျကြောငျးမြားတှငျ “ပတေံ”မြားလှူဒါနျးပေးရမညျ။အနညျးဆုံး တဈလလြှငျ တဈကွိမျ လှူဒါနျးပေးရမညျ။ “အမွဲထာဝရကိုယျရောကနျြးမာစိတျရောခမျြးသာစှာဖွငျ့ စီးပှားလာဘျလာဘ တိုးတကျရပါစလေို၏”ဟုဆုတောငျးပါ။ …
အပျင်းကြီးတဲ့ တနင်္ဂ​နွေ….ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ တနင်္လာ
အပျင်းကြီးတဲ့ တနင်္ဂ​နွေ….ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ တနင်္လာ ” အပျင်းကြီးတဲ့ တနင်္ဂ​နွေ ” အပျင်းကြီးတယ် ။ဘယ်လောက်ပျင်းသလဲဆိုရင် ပျင်းဖို့တောင်ပျင်းနေတဲ့သူတွေ။ ဥာဏ်ကောင်းတယ်။ အခြားသူတွေအမြင်မှာတော့ လူလိမ္မာလေး အိမ်မှာဆိုအော်ကြောလန် ချောတာမျိုး မဟုတ်ဘူး ချစ်ဖို့ကောင်းကြတယ် …. မသိတဲ့လူတွေနဲ့ကျရင်တော့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ မာနကြီးတဲ့ပုံ ။ တကယ့်အကြောင်းသိသူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာတော့ ငပေါ။ အနေအေးတယ်​လို့ထင်​ရ​ပေမယ့်​ တကယ်​​တမ်းကျ ကုပ်ကမြင်းလေးတွေ …။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲအရမ်းခင်တယ် ။ အနစ်နာခံပြီးပေါင်းတတ်တယ် ။ အငြင်းသန်လိုက်တာလဲ လွန်ရော။ သူတို့နဲ့ပြိုင်ငြင်းမယ့်အစား ကျားဖင်သာပြေးနှိုက်လိုက်ပါ …။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်လဲ ကိုယ့်အသိစ်ိတ်နဲ့ကိုယ်လုပ်တယ်။ သူတို့ကို အမိန့်ပေးရင်လုံးဝမကြိုက်ဘူး ။ ကလေးဆန်တယ် အရွဲ့တိုက်တတ်တယ် …။ တော်ရုံလူတစ်ယောက်ကိုမမုန်းတတ်ဘူး ။ မုန်းပြီဆိုလဲ နာမည်တောင်မကြားချင်တော့လောက်အောင်ပဲ ။ …
မွေးတဲ့နေ့နံအလိုက် မတူညီကြတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ အမူအကျင့်လေးများ
လူတော်တော်များများက တစ်ယောက်ယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ စကားများလိုက်တာ သောကြာလား၊ ဒေါသကြီးတယ် စနေလား စသဖြင့် မေးတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အသွင်အပြင်၊ အမူအကျင့်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်မွေးတဲ့နေ့ကို တကယ်ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်သလား ဆိုတာ သေချာသိရအောင် မွေးတဲ့နေ့နံအလိုက် ရှိနေကြတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) တနင်္လာ တနင်္လာနေ့မှာ မွေးတဲ့သူလေးတွေက ကြင်နာတတ်တယ်၊ လူကြီးဆန်တယ်၊ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က ဘာမှထွေထွေထူးထူးပြင်ဆင်မထားတာတောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့သူလေးတွေပေါ့။ တည်ငြိမ်ပြီး လူကြီးဆန်တဲ့ ၊ နွေးထွေးတဲ့ တနင်္လာသားသမီးလေးတွေဟာ ဘယ်ပဲသွားသွား လူချစ်လူခင်လည်းများတဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အင်္ဂါ ရဲရင့်ပြီး ကြောက်စိတ်မရှိတဲ့၊ စိတ်မရှည်တတ်တဲ့၊ တဲ့တိုးစကားတွေပဲပြောတတ်တဲ့၊ အမြဲလိုလို တက်ကြွပြီး အရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူလေးတွေပါ။ သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ …
အမြဲတမ်း ငွေမပြတ်စေတဲ့ ယတြာ
အမြဲတမ်း ငွေမပြတ်စေတဲ့ ယတြာ ” ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ ပညာရပ်များထဲက တင်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် …။ အမြဲတမ်း ငွေမပြတ်စေတဲ့ယတြာ နှင့် ဈေးဆိုင် အရောင်းဆိုင်မှာ ဧည့်သည်စည် ကားစေရန် ယတြာ တွေ ….. ငွေဖလား ဒါမှမဟုတ် ကြေးဖလား တစ်လုံးထဲမှာ ငွေစက္ကူထဲက တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ငွေစက္ကူတစ်ရွက် ကို ဖြန့်ခင်းထားလိုက်ပါ ။ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ငွေစက္ကူ အတိုင်းအတာနဲ့ တွက်ပြီး ထည့်နိုင်ပါတယ် …။ တတ်နိုင် တဲ့ လူအတွက်ကတော့ တစ်သောင်းတန်ပေါ့၊ ဒေါ်လာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူ ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ထည့်ပေါ့။ ပြီးရင် အဲဒီ ငွေစက္ကူထည့်ထားတဲ့ ဖလားထဲကို ရေဖြည်းဖြည်းခြင်း လောင်းထည့်ပါ …
အိမ်တွင်းပူလျှင်(သို့မဟုတ်) အိမ်သန့်စေလိုလျှင် ယတြာ
အိမ်တွင်းပူလျှင်(သို့မဟုတ်) အိမ်သန့်စေလိုလျှင် ယတြာ နေအိမ်သန့်လိုသော်အခါ ဒါတွေ လုပ်ဆောင်ပါ …. ။ မိမိနေထိုင်သောအိမ်တွင်မိသားစုများမကြာခဏရန်ဖြစ်ခြင်း၊ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ထိုအိမ်တွင်အနှောင့်ယှက်ရှိနေတတ်၏ .. .. ။ ထိုိအခါတွင်မိမိနေအိမ်ဘုရားမှာသံပုရာသီး10လုံးကိုလှူ ဒါန်းပါ … ။ဘုရားတွင်စွန့်ပြီးသောအခါ1လုံးအားအိမ်အဝင်ဝတွင်သံဖြင့်ရိုက်ထားပါ … ။ ကျန်ရှိနေတဲ့သံပရာသီးများအားနေအိမ်ပတ်လည်တွင်ချထားပါ။မကြာခဏဆိုသလိုမိမိရဲ့နေအိမ်အားရှာလကာရည်ပက်ဖြန်းပေးပါ …. ။ ဆရာမ သုတစံ Unicode အိမျတှငျးပူလြှငျ(သို့မဟုတျ) အိမျသနျ့စလေိုလြှငျ ယတွာ နအေိမျသနျ့လိုသျောအခါ ဒါတှေ လုပျဆောငျပါ …. ။ မိမိနထေိုငျသောအိမျတှငျမိသားစုမြားမကွာခဏရနျဖွဈခွငျး၊ကနျြးမာရေးညံ့လြှငျထိုအိမျတှငျအနှောငျ့ယှကျရှိနတေတျ၏ .. .. ။ ထိုအခါတှငျမိမိနအေိမျဘုရားမှာသံပုရာသီး10လုံးကိုလှူ ဒါနျးပါ … ။ဘုရားတှငျစှနျ့ပွီးသောအခါ1လုံးအားအိမျအဝငျဝတှငျသံဖွငျ့ရိုကျထားပါ … ။ ကနျြရှိနတေဲ့သံပရာသီးမြားအားနအေိမျပတျလညျတှငျခထြားပါ။မကွာခဏဆိုသလိုမိမိရဲ့နအေိမျအားရှာလကာရညျပကျဖွနျးပေးပါ …. ။ ဆရာမ သုတစံ
ငယ်စဉ်က သာမန်ပေမယ့် အသက်ကြီးလာမှ ပိုထက်မြက်လာကြတဲ့ ရာသီခွင် (၄)ခု
ရာသီခွင် (၁၂)ခုရှိတဲ့အနက် မွေးဖွားတဲ့ ရာသီခွင်တွေအလိုက် လူသားတွေမှာ အခြေခံကျတဲ့ တူညီမှု၊ ထူးခြားမှုကိုယ်စီ ရှိနေကြပါတယ်။ ရာသီခွင်တွေရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇတွေကို သုံးသပ်ကြည့်ထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေအရမှာတော့ ဒီရာသီခွင်တွေဟာ အရွယ်ရောက်မှ ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန် ပိုထက်မြက်လာကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါသတဲ့။ ပြိဿရာသီဖွား (April 20 – May 20) ပြိဿရာသီဖွားတွေဟာ ကကလေးဘဝနဲ့ လူငယ်ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့ ခက်ခဲနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေ ကောင်းကောင်း သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ပြိဿတို့ဟာ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ကနေ စပြီး တဟုန်ထိုး အောင်မြင်တဲ့အထိ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး မြင့်လာကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား (October 23 – November 21) ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားတွေက …
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အကြောင်း
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အကြောင်း ချစ်​သူအ​ပေါ် အနိုင်​ယူ လိုတဲ့ စိတ် ​ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျ အတိုင်း ဖြစ်​​စေချင်​တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်​တတ် ​ကြတယ် … ။ တနင်္ဂ​နွေ​ သားသမီး​တွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်း​ပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ စရိုက်​​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​ထား သူ​တွေပါ။ ဒါ​ကြောင့် သူတို့ဟာ အခြားလူ​တွေနဲ့ ကွဲပြား​နေတတ် ကြပါတယ် … ။ တနင်္ဂ​နွေ သားသမီး​တွေဟာ စာဖတ် ​ဝါသနာ ပါကြတယ်။ ဗဟုသုတကို လိုက်​စားတယ်။ အအိပ်​မက်တယ်​။ အစားမကြီးဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ ခဏ ခဏ စား​နေတတ်​ တာမျိုး၊ …
” ပိုက်ဆံ အကြွေး ရစရာရှိတဲ့ သူတွေ တောင်းစရာ မလိုပဲ ပြန်လာ ပေးစေတဲ့ နည်း “ ပိုက်ဆံ အကြွေး ရစရာ ရှိတဲ့ သူတွေ တောင်းစရာ မလိုပဲ ပြန်လာ ပေးစေတဲ့နည်း ပိုက်ဆံ အကြွေး အမြန်ပြန်လာ ဆပ်ရန် ယတြာ အစီအရင် လေးပါ …။ မိမိပိုက်ဆံ မိမိ ပြန်မရ၍ စိတ်ညစ် နေသူများ ပိုက်ဆံချေးပြီး ပြန်လာ မဆပ် နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့လုပ်နေ သူများ အကြွေးလည်း မဆပ် မိမိကို ရှောင်တိမ်း နေသူများအမြန်ဆုံး အကြွေး လာပေးရန် ဤယတြာကို လုပ်ဆောင် သင့်ပါတယ် …။ …
တစ်လအတွင်း ကံကောင်း လာစေရန် ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး ….
တစ်လအတွင်း ကံကောင်း လာစေရန် ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး … (၁) မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ ၁၀ ပုံ ၂ ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ… ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ… လှူပါ။ မိဘများ သက်ရှိ ထင်ရှားရှိလျင် မိဘများကိုလည်း လှူပါ။ (၂) ဘာသာရေးအတွက် အချိန်ပေးပါ။ မည်မျှပင် အလုပ်ရူပ်သည် ဖြစ်စေ …။ တစ်နေ့လျင် ၁ နာရီမျှလောက် ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ …။ (၃) တိရစ္ဆာန် လေးများကို အစားကျွေးပါ။ မိမိတွင် …